Top 25 Internet Radio Goobaha si Dhegayso Music Free
Marka laga reebo hoorto goobaha music likr Spotify, waxa kale oo aad ka heli kartaa music ka badan oo ka mid ah goobaha radio internet sida Pandora. Goobaha Kuwa aynu aad u dhagaystaan ​​kala duwan oo badan oo heeso sida ay artist, hees ama album aad xulan ama nooca in. Bal aan ka heli mid ka mid ah goobta radio aad u jeclaan doonaa ka mid ah liiska hoos ku qoran iyo bilaabaan in ay ku raaxaystaan ​​habayn ah.
Iyada oo ku dhowaad shan iyo toban sannadood ee radio tayo leh, Pandora ka shaqeeyaa hiddawadayaasha Music Mashruuca oo ku siin orod dhamaystiran oo dhamaystiran of music harmonic oo xiiso leh maalin kasta.
Iyada oo kala duwan oo weyn of music uu ka soo xulan iyo in ka badan laba boqol iyo saldhigyada xitaa in aan lacag-u qalabka sida Spotify meel u dhow ka heli kartaa, Slacker siisaa kuwa ku jecelna music la meel aad ku maqli music cusub iyo waayeelba
Arkaa kale oo caafimaad leh si ay u Spotify, waa version ah oo lacag la'aan ah in uu leeyahay maktabad ah mar walba sii koraya. Wax kasta oo dhadhan iyo hanaan marka ay timaado music, Grooveshark yeelan doontaa wax aad jeceshahay.
Last FM waa lacag la'aan, u weyn oo aad u fiican. Shakhsiyeeyo music dhadhan aad si fudud oo dhaqso leh qalab la safeeyey raadinta in si sahlan ka dhigi kartaa noloshaada - tani waa mid ka mid ah adeegyada music prmium internetka la joogo.
Bixinta helaan shan kun oo idaacadaha kala duwan kuwaas oo dhab ahaantii, waaxana DJ ah, waxaad dhab ah oo kala duwan Raaxo oo ka socoda oo isticmaalaya adeegga sidaan oo kale ah ka heli - waa xalka ugu fiican ee loo helo music aad dhab ahaantii ku raaxaysan in qaybaha aad dhagaysiga ka maqnaan!
Iyadoo in ka badan 800,000 oo qof online adigoo isticmaalaya Shoutcast waqti kasta oo ka mid ah iyo in ka badan 50,000 oo idaacadaha tani waa oen oo ka mid ah xarumaha idaacadaha ugu kala duwan meel kasta oo webka oo. Laga soo bilaabo technofest si heer sare ah, waxa uu leeyahay wax walba oo aad u baahan tahay.
AccuRadio Saaxiib ugu fiican ee maalinta shaqeeyo - waxa ay leedahay xulashada weyn ee channels oo ugu wanaagsan oo dhan waxa ay gebi ahaanba bilaash ah si ay ugu biiraan oo ay isticmaalaan on go ah. Saaxiibkii fiican music taageere kharash-ool ah.
Samaynta isticmaalka tags in aad soo playlists fudud ka buuxaan Gurtida aad u jecel oo u jeclaan doonaa mustaqbalka, tani waa app ugu fiican ee loo helo music cusub ka dib markii ay dhagaystaan ​​isla album hal mar ah oo aad u badan.
Jango waa ciyaaryahan music free la ururinta cajiib ah fanaaniinta ka mid ah kuwa aan aad u baxsan karo dadka marnaba ma maqlaan ah ka hor iyo ka dib on Jango! Sort aad music by sifayn, style, theme ama toban sano - waa idinka ayay idiin taallaa.
AOL Radio, oo u dhiganta Slacker weyn, waxa uu leeyahay macno malaayiin heeso uu ka soo xulan kumanyaal fanaaniinta wada sugayeen in aad maqli raadkooda. Waa aalad aad u fudud iyo haddii aad isticmaali Slacker ee la soo dhaafay waxaad ka heli doontaa tan neecaw sixun.
Sida Spoify, Deezer waa 4G ciyaaryahan socon music in qulquli karaan audio idiin on go ah. Iyada oo noocyo kala duwan oo Times ayaa qorshaynaysa avialable waxaad ka heli kartaa tayada aad u baahan tahay kharash aad u qalmaan.
TuneIn waa app cajiib ah u riixaya galay aad muujinaya radio jecel iyo Nayroobi. Waxay leedahay ururinta weyn ee macno boqolaal kun oo saldhig iyo qeybiyo, kaamil ah u qabsasho iyo dabcan ka qabi karto in.
Ma doonaysaa in aad xarun raadiye oo u gaar ah? Samee playlists kuu gaar ah in dadka ku raaxaysan karaa guryahooda, sidoo kale? Rhapsody haddii mid ka mid ah boqorrada dunida app raadiyaha iyo noocyo kala duwan oo badan oo mobilada avaialble, iyo sidoo kale tijaabo lacag la'aan ah 30-maalin ah, waxaad ka heli kartaa wax walba oo aad u baahan tahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee ku saabsan music halkan.
Madadaalo A play on daahfurka erayga, tani waa app dhalaalaysa iyo cheery in u san yahay helo music waa in aad jir ah oo maskaxda iyo hab - haddii aad halgamayaan inay helaan Gurtida qaar ka wanaagsan in ay dhagaystaan, halkanu waa meeshii ay soo booqdaan - waa wax kaamil ah ka heli kartaa oo aad u!
Playlist.com yimaado magaca aad ka fili lahayd - waxa ay leedahay taxane ah oo playlists si ay u doortaan qaab uploaded by isticmaala. Isku Waxaad xitaa samayn kartaa, kaliya Gurtida aad jeceshahay gelin wada iyo geliyaan iska!
Rara waa ciyaaryahanka go music aan kaliya la jaan aad xirmooyinka warbaahinta bulshada caadiga ah oo dhan, laakiin waxa ay sidoo kale ballaaran user-friendly. Iyadoo in ka badan 22 milyan oo kuwan raadkaygay uu ka soo xulan iyo tirinta, waxaad ka heli doontaa wax aan macquul ahayn oo aan si aad u hesho hees ama fanaan aad jeceshahay iyada oo halkan!
# 17- SomaFM
Soma FM waa diferent xoogaa yar in channels radio caadiga ah. Markaas waa nidaamka radio madaxbanaan oo leh in ka badan 7,000 dhegeysta oo joogto ah, oo waxay bixisaa xayeysiis lahayn oo qaadataa oo keliya deeqaha noocan ah laga kuwa doonaya in ay bixiso. Waa ah idaacad cajiib ah iyo sidoo kale ffeatures Koox ka mid ah podcasts iyo playlists.
Shuffler waa qalab yar oo u gaar ah. Ma aha oo kaliya uu u siiyaan database weyn oo muusiko ah uu ka soo xulan oo wuxuu ku raaxaysan on go ah, laakiin waxaa jira wax badan oo playlists TV-la xiriira ka kooban sidaa darteed haddii aad raadinayso music show ka aad jeceshahay halkan aad ka heli karo.
BlinkBox waxaa ku shaqeeya by Rafaa supermarket TESCOs iyo waxay bixisaa noocyo kala duwan oo badan oo posts blog, saldhigyada music iyo music weyn in ay dhagaystaan. Raadinta kale oo u doorato caadiga ah halkaas? Tani waxaa laga yaabaa in aad xaq. Had iyo jeer sii kordhaya iyo hagaajinta, BlinkBox ayaa noqonaya mid si dhab ah loo jecel yahay sabab ah!
SkyFM waa app oo lacag la'aan ah oo aad ku helayso diyaar, doorasho mobile aad u diro daafaca dhegaysanaya in aad music. Jirran, oo ka mid ah fursadaha dhaqanka halkaas oo aad lacag iyo aad don'tgive xulashada ugu wanaagsan ee ay u suuragalin karta? Markaas SkyFM mihtj ust ahaan aad u. Aad Provideds kala duwan weyn ee channels uu ka soo xulan si aad u hesho muic aad hadda jecel.
iHeart waa saldhigga weyn radio kuu oggolaanaysa in aad soo qaado heeso aad rabto in ay dhagaystaan ​​oo ku salaysan xaaladaada. Sidoo kale, waxa aad qaadan kartaa bandhigyada classic in ay saaray ee la soo dhaafay ku ah nidaamka 'On-Baahida' kaas oo gabi ahaanba waa fiican ee qarribma aad jeceshahay muujinaysaa aad si fudud oo dhaqso maqli goobta.
GotRadio bixisaa afar saldhig oo muhiim ah - Indigo, DownHome, Meta iyo Allin - oo kulli way ka ciyaaro qaybaha kala duwan ee music. Wax kasta oo aad style yahay iyo waxa Gurtida aad ugu jeceshahay waa, waxaad ka heli doontaa halkan saldhigga weyn radio in loo isticmaali karaa on go ah ama guriga.
DiFM - waxay u taagan tahay dijital ah laga keeno - waa saldhigga weyn electronica kuu oggolaanaysa in aad soo qaado ka badan 60 channels miyuusik u gaar ah oo aad la siinayo qaabab kala duwan oo muusiko ah ee elektaroonigga ah. Shacab ah taageerayaasha music ah halkaas oo doonaya in ay wax xoogaa yar oo kala duwan iyo kuwa buka ee DJ sae kaani oo kale mar ah.
# 24. Tuna Radio
Raadinta goob deg deg ah, si sahlan loo isticmaali oo runtii lagu kalsoonaan karo radio kaliya? Eeg dheeraad ah lahayn. RadioTuna waa u fududahay in la isticmaalo marka la eego helidda idaacadaha iyo music in aad u jeclaan maanta. Waxaa jira xarumo badan oo halkaas aad si fudud waxaa laga yaabaa in aan helay Theo ne in aad dhagaysan doonaa si joogto ah.
1.FM waa xarun raadiye oo ku caashaqa oo dhan music ah. Waxa uu dhammaan qaybaha dhaqanka daboolay iyo sidoo kale qaar ka mid ah in aanu marnaba xitaa maqlay! Waxaa soo saarta isku xirnaanta sare radio tayada maalinta oo dhan waxaad la tagay calaamad cad oo inta aad la dheesho in ay music aad ugu jecel yihiin.
> Resource > Download > Top 25 Free Internet Radio Goobaha durdurka Music istareexsan